Mingalarbar - တရုတ်က ထိုင်ဝမ်ကို ဝင်သိမ်းနိုင်မလား
Call us: +959-259609399
ICT Products Services
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂျပန်၊ မလေးရှားနှင့် မာရှယ်ကျွန်း စုနိုင်ငံများမှ သံ...
အိုးအိမ်စွန့် ထွက်ပြေး ခဲ့ရပြီး ဘယ်မှ ထွက်လို့ မရကြဘဲ ပိတ်မိနေကြတဲ့ ကချင် စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ထု...
ဝ ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ FPNCC က အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တ...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည် မြို့နယ်တွင် ပိုင်ရှင်မဲ့သစ် ဖမ်းဆီးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများ၏ တိုင...
အထက်တန်း ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် များသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ် ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျေးလက်နေ ပြည်သ...
ရိုက်တာသတင်းထောက်များ ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုခဲ့ခြင်းမှာ အရေးယူခံရမည်...
China Communication Construction Company (CCCC) မှ ရေးဆွဲမည့် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းအကြို အဆိုပြု...
ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဥပဒေ ထက်ကျော်လွန်သော အမိန့်၊ ညွှန် ကြားချက်များရှိနေကြောင်း ဖမ်း ဆီးခံထားရသည့် ဒုရဲမှူး...
တရုတ်က ထိုင်ဝမ်ကို ဝင်သိမ်းနိုင်မလား
By Ian Easton 10 May 2018
အဆိုးဆုံး အိပ်မက်ဟု ဆိုနိုင်သော ဇာတ်ညွှန်းတခု ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံက အလွန်ကြီးကျယ်သည့် ဗျူဟာမြောက် လှည့်စားမှုတခုကို ခင်းကျင်း၍ ထိုင်ဝမ်၏ အားနည်းသော ကာကွယ်ရေးကို အငိုက်ဖမ်းလိုက်မည်။ ထိုင်ဝမ် အစိုးရနှင့် စစ်တပ်တို့မှာ အလွန် အံ့အားသင့်သွားကြမည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိုးစစ်အောက်တွင် သူတို့ ပြိုလဲသွားကြမည်။ ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပင် ကျွန်းပေါ်မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သော အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများမှာ တရုတ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) ၏ ဖမ်းဆီးထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ရောက်သွားကြမည်။ ထိုင်ပေရှိ သမ္မတရုံး ပေါ်တွင် ရွှေကြယ် ၅ ပွင့်ပါသော အနီရောင် အလံတခု တလူလူလွင့်လာမည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဇာတ်ညွှန်းတခုက မည်မျှ လက်တွေ့ ကျပါသနည်း။ လျှပ်တပျတ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းက ဘာနှင့်တူပါသနည်း။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရေး ထိုင်ဝမ်ကို အမေရိကန်က မည်သို့ ကူညီနိုင်ပါသနည်း။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဝမ် စစ်ထောက်လှမ်းရေးဗျူရိုက ရေလက်ကြားတဖက်မှ သူတို့၏ ရန်သူများသည် ထိုင်ဝမ် အစိုးရကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် အစီအစဉ်သစ်တခုကို လျှို့ဝှက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ PLA က ထိုစစ်ရေး အစီအစဉ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ စတင်နေခြင်းပင်။ အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် ကြည်းတပ်၊ ရေတပ် ပူးပေါင်း၍ ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်မည့် ပုံစံဖန်တီးထားသည်။ အဓိက ပစ်မှတ်မှာ တိုင်ပေ ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်က စနစ်တကျ လှုပ်ရှားမှုပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။ တရုတ်တပ်ဖွဲ့များကို ထိုင်ဝမ် တဖက်ကမ်း(တရုတ်နိုင်ငံ ဖက်ခြမ်း) ရှိ ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက်တွင် လှုပ်ရှားရန်နှင့် စုစည်းရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များက ကျည်အစစ်များဖြင့် ပစ်ခတ်မည့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ရှိကြောင်း ကြေညာပြီး ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား တွင် နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောများ သွားလာခြင်းကို ပိတ်ပင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သတိထား စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျစေရန်နှင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများက အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများသည် နိုင်ငံရေးအရ ဟိတ်ဟန်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်စေရန် တရုတ် အစိုးရက ၎င်းတို့ပိုင် မီဒီယာ သတင်းဌာနများနှင့် နိုင်ငံခြားမှ သြဇာရှိသည့် အေးဂျင့်များကို အသုံးပြုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် တပ်ဖွဲ့များကို အရပ်ဖက် ကူးတို့သင်္ဘောများနှင့် တရုတ်နှင့် ထိုင်ဝမ်ကြားမှ ရေပြင်တွင် ပုံမှန် ခေါက်တုန့် ခေါက် ပြန် သွားလာနေကျ သင်္ဘောများပေါ်သို့ တင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရန် စီစဉ်ထားသည့် နေ့တွင် အဆိုပါ သင်္ဘောများက ထိုင်ဝမ်သို့ ဦးတည် ခုတ်မောင်းကြမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ သူတို့၏ လှုပ်ရှားမှု မပေါ် ပေါက်စေရေး ကြိုစား အားထုတ်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
တိုင်ပေ ဆိပ်ကမ်းသို့ သူတို့ရောက်သည့်အခါ အရပ်သား အသွင်ယူထားသည့် သင်္ဘောများက ယန္တယားနှင့် တင့်ကား တပ်များကို ချပေးလိမ့်မည်။ သူတို့က ဒေသခံအိမ်များကို ဖျက်ဆီး၍ ရဟတ်ယာဉ် အုပ်စုများ၊ သင်္ဘောများဖြင့် ရောက်လာ မည့် တပ်ကူများအတွက် နေရာရှင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် လျှင်မြန်သော တရုတ် ဟူးဗားရှပ်ပြေးယာဉ်များက ကွန်မန်ဒိုများကို တင်ဆောင်လာပြီး တမ်စွေ Tamsui မြစ် အနီးတွင် ချပေးလိမ့်မည်။ တောက်ယွမ် Taoyuan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၏ ပြေးလမ်းများပေါ်သို့ လေထီးတပ်ဖွဲ့များ ဆင်းသက်လာကြလိမ့်မည်။ မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာပင် ထိုင်ဝမ် အနောက်မြောက် ကမ်းရိုးတန်း တခုလုံးက စစ်ပွဲဇုန် တခု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ထိုင်ဝမ်ဖက်က ချက်ချင်းမတုန့်ပြန်နိုင်သည့် အခြေအနေ၌ ရှိနေစေရန် PLA က ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဒုံးပျံ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ပစ်မှတ်ထား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခြင်းများ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောဖြင်း ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်း နှင့် ပြင်းထန်စွာ ဗုံးကျဲုခြင်းများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် ထိုင်ဝမ် တပ်ဖွဲ့ များကို ကျွန်း၏ တောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် ထိန်းထားပြီး တိုင်ပေသို့ စစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိအောင် ပြုလုပ်ရန်လည်း ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
PLA အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ရဲတင်းလှသော စစ်ဆင်ရေး တခုကို ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက် နီးပါး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကို အလစ်အငိုက် ဖမ်းနိုင်မှသာလျှင် ထိုအစီအစဉ်က အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ တိုက်ခိုက်မှုတခု လာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တိုင်ပေက သိခဲ့လျှင် ၎င်းတို့က တပ်များကို လျှင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်း၍ ရေလက်ကြားကို မိုင်းထောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အလစ်အငိုက် ရယူနိုင်ခြင်းသာမရှိခဲ့လျှင် PLA အနေဖြင့် အလွန်အန္တရယ်များသော ခြုံခိုတိုက်ပွဲ တခုအတွင်းသို့ မျက်စိမှိတ် လမ်းလျှောက်ဝင်သွားသလိုမျိုးသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အစီအစဉ် မပေါက်ကြားအောင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်ဌာနချုပ်က ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မရှောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ အမှန်တကယ် တွင် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် တခုက သူတို့ လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထောက်လှမ်းရေးသတင်းကြောင့် ထိုင်ဝမ် အာဏာ ပိုင်များက မြို့တော် ကာကွယ်ရေးကို မြှင့်တင်မှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် သူတို့က အမှတ် ၆၆ လက်ရွေးစင် မရိန်း တပ်မကို မြို့တော် အပြင်ဘက်ရှိ တောင်ကုန်းများပေါ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ လေကြောင်း ကာကွယ် ရေးစနစ် ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းစေရန် သူတို့က အဆင့်မြင့် Tien Kung နှင့် Patriot ဒုံးပျံ တပ်ဖွဲ့များကို မြို့တော် တဝိုက်တွင် ချထားခဲ့သည်။
တမ်စွေမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အနီးတွင် တည်ရှိသော ထိုင်ဝမ်တပ်မတော် Guandu ကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်က ကျွန်း၏ မြောက်ဘက်အစွန်းကို ဟူးဗားယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရေး ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခဲ့ သည်။ ယန္တယားနှင့် သံချပ်ကာ တပ်မများက တောက်ယွမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နှင့် အနီးအနားမှ ကမ်းခြေများကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ လေကြောင်းနှင့် အထူး တပ်ဖွဲ့များ ဌာနချုပ်က လျှင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေး Blackhawk နှင့် Apache တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်သစ်များ အားဖြည့်ခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ် ရေတပ်က ဒုံးကျည်တင် အမြန်သင်္ဘော ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ထိုင်ဝမ် မြောက်ပိုင်းတွင် ချထားခဲ့သည်။ သင်္ဘော ပစ် ဒုံးများကို ကွန်ကရစ် ဘန်ကာဟောင်းများထဲ မထားတော့ဘဲ ပိုမို လွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ကားဖြင့် သယ်ဆောင်၍ ပစ်သည့် စင်များပေါ်သို့ တင်ခဲ့သည်။ တိုင်ပေ မြို့နယ်တွင် စစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဗျူရို တပ်ဖွဲ့များက အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရ အဆောက်အဦးများကို ကာကွယ်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လက်နက် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ တိုင်ပေကို ကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ဟာကွက်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုက လျှင်မြန်စွာ တိုးပွားလာနေသည်။
ထိုင်ဝမ်၏ ကာကွယ်ရေးဗျူဟာက ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့များကို ပိုမို လျှင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ရေး ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုနေသည်။ သို့မှာသာ ရန်သူ၏ ရှောင်တခင် တိုက်ခိုက်မှုများကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအားထုတ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်း အနေဖြင့် တပ်ဖွဲ့အင်အားကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အပျော်တမ်းတပ်ဖွဲ့တခုသို့ ဦးတည်နေသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၂၇၀၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ထိုင်ဝမ်တပ်ဖွဲ့များတွင် ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူ ၁၈၀၀၀၀ ခန့်သာ ရှိတော့ပြီး နောက်ထပ် အရံတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁.၅ သန်းက အထောက်အကူအဖြစ် ရှိနေသည်။ လူဦးရေ ၂၃ သန်း ရှိသော နိုင်ငံတခုအတွက် ကြီးမားသော စစ်တပ်တခု အဖြစ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ရှိခဲ့သည်ထက် များစွာ သေးငယ်သွားသော်လည်း ဟောင်းနွမ်းအိုမင်းသော လက်နက်ကိရိယာများနှင့် ခေတ်မမီတော့သော လေ့ကျင့်ရေးများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အားထုတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် လိုနေသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပါဝင်ရန် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ တခုရှိပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက အဆင့်မြင့် လေ့ကျင့်မှုများနှင့် လက်နက်များ ရရှိနိုင်ရန် အမေရိကန် နိုင်ငံကသာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ရန်လိုလာမည့်သူများထက် ထိုင်ဝမ် တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့များက ခြေတလှမ်းစောနိုင်ရန် အမေရိကန် စစ်ဌာနချုပ်က သူတို့ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများသို့ လာရောက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ဟာဝိုင်ယီနှင့် ဂူအမ်မှ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများသို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန် အစိုးရက ထိုင်ဝမ်သို့ လက်နက်များ ပုံမှန်ရောင်းချခြင်းကို ပြန်လည်စတင်သင့်ပါသည်။ သင်္ဘောများ လာရောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းပေးခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ လာရောက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ် သင့်ပါသည်။
အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရေလက်ကြားဖြတ်ကျော် ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတ ဆိုင်အင်းဝမ် Tsai Ing-wen က အလယ်အလတ် ကျသော ချဉ်းကပ်မှုကို ရယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ ချစ်ကြည်ရေး သင်္ကေတများက ထပ်တလဲလဲ ညင်းဆန်ခံနေရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ အာဏာရှင်ဆန်သော ခေါင်းဆောင် ရှီကျင်ဖျင့် Xi Jinping က လက်ရှိ အနေအထားကို ထိန်းထားရန် လုံးဝ ဆန္ဒ မရှိပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးက သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ မဟုတ်ပါ။ ထိုင်ဝမ်ကို သိမ်းပိုက်ရေးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတွင် စစ်ပွဲကြီးတခု မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်က သူ၏ ကံကြမ္မာကို အချိန်ဇယားတခုနှင့် တွဲချိတ်ထားကြောင်း သက် သေ အထောက်အထား ရှိမနေပါ။ သူ၏ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခွင့် (သို့မဟုတ် မလှုပ်ရှားခွင့်) ကို အကြီးဆုံးဖြစ်အောင် ချဲ့ ထွင်ရန် သူက ကြိုးစားဖွယ်ရာ အသွင်ဖြစ်နေပါသည်။
၂၀၂၀ မတိုင်မီ ထိုင်ဝမ်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရေး အသင့်ဖြစ်နေစရန် PLA ၌ ဦးတည်ချက်ရှိသည်။ တရုတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ထိုင်ဝမ်သို့ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် ရွေးချယ်စရာများ ပါဝင်သည့် အစီအစဉ်ဇယားကို ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုထဲမှနေ၍ ဥက္ကဌကြီး ရှီကျင်ဖျင့်က ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံသို့ လျှပ်တပျက် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရေးက ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော်လည်း စစ်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ များက အဆိုးဆုံး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် စဉ်းစားစရာ တခုဖြစ်ပါသည်။ အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း အားဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ထိုင်ဝမ်တို့က ယခု(လျှပ်တပျက် ကျူးကျော်ရေး) အစီအစဉ် အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်ရေး အစီအစဉ် အားလုံးကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ တားဆီးနိုင်လိမ့်မည် လိုအပ်လာပါက ချေမှုန်းနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(Ian Easton သညျ Project 2049 Institute မှ သုတသေီ ပညာရှငျ တဦး ဖွဈပွီး “The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia” စာအုပျကို ရေးသားခဲ့သူ ဖွဈပါသညျ။ သူ၏ The Diplomat ပါ Could China Flash Invade Taiwan? ဆောငျးပါးကို ဘာသာပွနျသညျ)
WARDAN STREET, 21ST FLOOR
Copyright © 2019, Mingalarbar. All Rights Reserved.